Ny Fenitra Iraisam-pirenena Solon'anarana Anarana na Iraisam-pirenena Fitsipika Anarana Solon'anarana (ISNI) dia ny solon'anarana ho an'ny tsy manam-paharoa ny famantarana-bahoaka ny mombamomba ny mpandray anjara ao amin'ny haino aman-jery votoaty vaovao, toy ny boky, fandaharana fahitalavitra, ary gazety an-tsoratra lahatsoratra. Toy izany id ahitana 16 numerical namerenana nisaraka ho fizarana efatra.
Mandroso eo ambanin'ireo famantaran'ny ny Fikambanana Iraisam-pirenena ho an'ny Penitra (ISO) toy ny Volavolan-Fenitra Iraisam-pirenena 27729. Ny fitsipika manan-kery nivoaka tamin'ny 15 Martsa 2012. Ny ISO komity teknika 46, da 9 (TC 46/SC 9) dia tompon'andraikitra amin'ny fampandrosoana ny fitsipika.
Ny ISNI azo ampiasaina ny fanazavana ny anarana izay raha tsy izany dia mety ho sahiran-tsaina, ary ny rohy ny angon-drakitra momba ny anarana izay dia nangonina sy ampiasaina amin'ny sehatra rehetra ny haino aman-jery orinasa.
Mampiasa ny ISNIHanova
Ny ISNI mamela ny tokan-tena maha-izy azy (toy ny solonanarana ' ny mpanoratra na ny fisian'ny ampiasain'ny ny mpitory) mba ho fantatra ny fampiasana tsy manam-paharoa maro. Tsy manam-paharoa io isa dia mety ho mifandray misy ny maro hafa identifiers izay ampiasaina manerana ny haino aman-jery orinasa mba fantaro ny anarana sy endrika hafa ny maha-izy azy.
Ohatra iray ny fampiasana ny toy izany isa izany ny famantarana ny mozika mpanakanto izay ihany koa ny mpanoratra na ny mozika sy ny tononkalo. Misy izy na dia afaka amin'izao fotoana izao ho fantatra maro samy hafa ny tahiry mampiasa maro tsy miankina sy ny fanjakana famantarana ny rafitra, eo ambanin'ny ISNI rafitra, na izy dia tsy maintsy ampiarahina tsotra fisoratana anarana ISNI. Maro samy hafa ny tahiry dia afaka fifanakalozana angona momba izany indrindra ny maha-izy azy fa tsy miditra dirty fomba toy izany raha mampitaha andinin-teny ny tady. Ny matetika nitanisa ohatra nasehony eo amin ' ny teny grika no olana fa dia voakasiky ny famantarana ny "Jaona Papadopoulos" ao amin'ny banky angona. Raha mety misy maro ny rakitsoratra ho an 'i John Papadopoulos", dia tsy foana ny mazava izay mirakitra an-tsoratra manondro ny manokana "Ioannis Papadopoulos" dia nikaroka.
Raha ny mpanoratra iray efa nivoaka tao amin'ny karazany be dia be ny anarana na ny anaram-bosotra, ny anarana tsirairay dia hahazo ny ISNI.
Ny ISNI azo ampiasaina amin'ny trano famakiam-boky sy ny archives rehefa fizarana araky ny vaovao, fa ny marina kokoa fikarohana vaovao ao amin'ny aterineto sy ao amin'ny angona, ary afaka manampy ny fitantanana ny zon'olombelona manerana ny sisintanim-pirenena sy ny nomerika ny tontolo iainana.
Official websiteEndrika:Επίσημη ιστοσελίδα
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Standard_Name_Identifier&oldid=795170"
Dernière modification le 14 Janoary 2017, à 19:55
Voaova farany tamin'ny 14 Janoary 2017 amin'ny 19:55 ity pejy ity.